भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको दाबी गरेका छन् – Khabar PatrikaNp
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको दाबी गरेका छन्
August 9, 2020 139
भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट गौतम बुद्धलाई भारतको दाबी गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत दुई वर्षअघिको बुद्ध पूर्णिमाको अवसर दिएको मन्तव्यमा भारत बुद्धको भूमि भएको दाबी गरेका थिए । मोदीको उक्त भनाइको पनि नेपालमा विरोध भएको थियो । तर उनै मोदीले ठिक ६ वर्षअघि नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्ध भूमि भएको र सारा विश्वलाई शान्तिका लागि प्रेरित भएको उल्लेख गरेका थिए । मोदीको गरेको उक्त सम्बोधनले नेपालमा निकै वाहवाही पाएको थियो । तर, नेपालमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका मोदीले नै बेलाबखत बुद्ध भारतीय भएको दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मोदीले भारतले विश्वलाई बुद्ध दिएको दाबी गरेका थिए ।
भारतीय पक्षबाट बेलाबखत आउने यस किसिमका अभिव्यक्तिहरुको नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा भारतीय टेलिभिजन च्यानल जीले प्रसारण गरेको बुद्धको जीवनीमा आधारित सिरियललाई लिएर पनि ठूलो विवाद भएको थियो । उक्त सिरियलमा बुद्धलाई भारतीय भएको देखाइएको थियो । त्यसपछि फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा उक्त सिरियलमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागसहित तीव्र आक्रोश प्रकट गरिएको थियो । नेपालमा चर्को विरोध भएपछि नेपालका केबल अपरेटरहरुले उक्त सिरियलको प्रसारणमै रोक लगाएका थिए ।
त्यसताका नेपाल भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिहंले दिल्ली फर्कनुअघि काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बुद्ध नेपालमै जन्मेको भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । साथै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी भएको कुरामा भारत सरकारले प्रष्ट रहेको बताएको थियो । पछि उक्त सिरियलका प्रमुख कलाकार कविर वेदीले पनि ट्विटरमार्फत् माफी मागेका थिए ।
Prevपछिल्लो २४ घण्टामा ३७८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा ६२ जना,तथ्यांकमा काेराेना – नेपाल
Nextविज्ञहरू भन्छन् शैक्षिक सत्र खारेज हुन सक्छ
सुत्नु अघि सुपा देउराली माताको दर्शन गर्दै भोलिको राशिफल पढ्नुहोस !
उडिरहेको नागलाई देखेको5सेकेन्डमा OM लेखी सेयर गर्नुहोस तपाईंको अधुरो काम बन्नेछ
बास्तबिकता यस्तो रहेछ अर्जुन बि.कको घ’टना बारे आमा आक्रोशित हुदै मिडियामा, गल्ति कसको ? (भिडियो सहित)
गोङ्गबुस्थि घटनाको त्यो दिन (भिडियोसहित)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (31244)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25734)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23543)